I-Destiny 2 ngoku iyafumaneka kwi-PlayStation 4 nakwi-Xbox One | Iindaba zeGajethi
I-Destiny 2 ngoku iyafumaneka kwi-PlayStation 4 nakwi-Xbox One
Umsebenzi wenziwe izolo ukuthengisa enye ye-FPS erhuqe uninzi lwabalandeli kule minyaka idlulileyoI-Destiny 2 ifika ukuphucula oku kungasentla kangangoko kunokwenzeka kwaye ukumiliselwa kwayo kubangele isiphithiphithi kwihlabathi liphela, njengoko kulindelwe. Amanani okuthengisa kwangoko ahlala elungile, kwaye ukude kwakho ngexesha ngeCall of Duty: I-WWII inokukunceda kuloo nto.
Indawo yokuqala eyafika ngo-2014 Kwaye kuye kwasinda ekuhambeni kwexesha kakuhle xa ujonga indlela iminyaka ehamba ngayo kolu shishino. Ukuphuculwa kwetekhnoloji kunye nokusebenza kuya kwenza ukuba ubanjwe kwi-aura yabo yokudlala.
Enye yezinto ezintsha kukuba akuyi kuba yimfuneko ukuhamba ngeendlela zokuhamba phakathi kweeplanethi, Ukongeza ukufikelela kwelona qonga lifashoni phakathi kweengcali kwiminyaka yakutshanje okokuqala ngqa, iPC, ke ukuzama ukubamba abaphulaphuli abakhethekileyo abavelisa isixa semali kunye nentengiso, kwaye ngaphezulu kwako konke, iyakwazi ukuguqula umdlalo wevidiyo ube ngumdlalo we-e kwiveki nje ezimbalwa. Nangona kunjalo, inguqulelo yePC kuya kufuneka ilinde de kube ngumhla wamashumi amabini anesine, sicinga ukuba ngezizathu zokuthengisa zentengiso yeconsole.
IXbox 360 kunye nePS3 zishiyekile ngasemva, Kubonakala ngathi bezicacile malunga nezinto eziphambili ngokubaluleka. Uninzi lotshintsho lufikile kwinkqubo yeemodeli zePvP kunye neemephu ezimangalisayo eziye zabonwa kwiitreyila zokumiliselwa. Asithandabuzi ukuba i-Destiny 2 iya kuncedisa, okanye iphucule, yintoni eyandulelayo. Okwangoku sisalinde ukukhutshwa okunomdla kakhulu njenge Ifowuni yoMsebenzi: I-WWII ngo-Novemba olandelayo we-3 kwaye sele sivavanyile, kunye nePES zakudala (nge-14 kaSeptemba) kunye neFIFA 2018. Ungaphoswa lulonke ulwazi olukwisixhobo seActualidad.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » I-Destiny 2 ngoku iyafumaneka kwi-PlayStation 4 nakwi-Xbox One
UGoogle uzakuphucula iikhamera zeSitrato emva kweminyaka esibhozo ngobuchwephesha obufanayo